apple ipad 2 smart cover kuratidzira
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPad 2 Smart Cover Kuratidzira
Apple iPad 2 Smart Cover Kuratidzira
Pachiitiko chekufumura cheApple iPad 2, isu tese takaziviswa kune yakasarudzika yekuwanikidza iyo miganhu yemuganhu inodikanwa neimwe nzira kana iwe ukaitika kutenga iyo piritsi. Zvakafanana neiyo iPhone 4's bumper kesi, iyoSmart Kuputiraizvo zvakagadzirwa nechikwata chaApple zvinoita kunge chishongedzo chinowedzeredza chinowirirana sese zviri zviviri sechengetedzo uye chigadziko. Mutengo pa$ 39 yemhando dzakasiyana dze polyurethane, iyo inopihwa muraraungu wemavara, zvirokwazvo inotaridzika kuva chinhu chakavharika chakafa icho chaunoda kutora. Zvakare, iwe zvakare une mukana wekutenga iyo yakawanda premium kunzwadzeganda shanduro dzinozvirumbidza pamutengo wemadhora makumi matanhatu nemasere.
Zviripachena, chinhu chekutanga kuuya mupfungwa medu patakatora iyo Smart Cover kuIpad 2 ndeyekutiinongodzivirira rumwe rutivi rweyunitipanguva yakapihwa - kusiya imwe izere iripachena kune zvakatipoteredza. Saka kana isu tine ratidziro yakafukidzwa neiyo Smart Cover, yedu yakasikwa sisitimu ndeyekuti irambe yakaradzikwa kumusana kwayo, asi patakafunga zvakanyanya nezve brushed aruminiyamu yekumashure butiro, isu takazongopedzisira taitenderedza kuitira kuti iyo iPad 2 ivete pamusoro peSmart Cover.
Nekutenda, iyomagineti anobata zvakasimbaenda kumucheto wekuruboshwe weiyo iPad 2 uye inoda imwe yekuwedzera simba kuti ubvise. Uyezve, mamwe magineti ari padivi peimwe kumucheto kweSmart Cover anovhara paPadad 2 - nekudaro ichipa iyoyakasimba yakasimba inzwepasina kuwedzera kuwanda kune yayo yatove reza dzakaonda chimiro. Panguva imwecheteyo, iyo yekuratidzira inozvimisikidza yega simba, asi kana iwo magineti eSmart Cover akadzingwa kubva paPad 2, masimba ekuratidzira adzoka.
Sezvineiwo zvakakwana, isu takakatyamadzwa pakutanga maitiro ekushandura iyo Smart Cover kuva yayo kumira chinzvimbo. Mushure mekutsokonyora kwakatenderera kwechinguva, isu takazozvifungidzira sezvatakazvipeta kuita achimiro chine mativi matatu. Kubva apa, isu takakwanisa kuisa iyo iPad 2 pakona iyo inoita kuti ive yakasununguka kunyora, uye zvakare muchinzvimbo chepamusoroizvo zvinonyanya kubatsira kuona mafirimu. Kunyangwe isu taive nekusahadzika nezvekuchengetwa kwayo, inokwanisa kutsigira huremu hweiyo iPad 2 - asi zvakadaro haitipe rugare rwakakwana rwepfungwa sezvo padiki pesimba zvinoita kunge inokonzeresa iyo iPad 2 kubva panzvimbo yayo. Zvakangodaro, i & apos; chimwe chete chishongedzo icho chauchazoda kufunga kuchinhonga nekuda kwekuita kwayo kaviri. Kunyange zvakadaro, isu tichiri kukurudzira kuti iwe utarise mukutenga chinovhara chemufirimu kuti uchengetedze kuratidzwa kwayo zvakaringana futi.
ku & t disney pamwe
google pixel 6 kuburitsa zuva
Selenium Tutorial - Dzidza Browser Otomatiki neSelenium WebDriver
Aya ndiwo akanyanya kufarirwa eIOS uye Android zvishandiso muNorth America nekushandisa kwakasimba
Yakanakisa madhiri svondo rino: $ 200 kubva paZ Fold 2, iPhone 12 Pro Max uye S21 Ultra BOGO
Bata iyo Samsung Galaxy S8 mamiriro ekunze app widget yako Galaxy S7